Madaafiic hoobiyeyaal oo xalay saqdii dhexe lagu garaacay Xerada Xalane – STAR FM SOMALIA
Dadka deegaanka Wadajir ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa illaa shan madfac ah oo dhinaca Xalane ku dhacayay, iyadoo aan la ogeyn khasaare ka dhashay.
Afhayeenka Ciidamada AMISOM Joseph Kibet oo la hadlayay wakaalada wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa sheegay in illaa saddex madfac lagu soo tuuray.
Joseph Kibet ayaa sheegay in madaaficida ay ku soo dhaceen agagaarka Xarunta Xalane, isla markaana aysan jirin wax khasaare ah oo sababtay.
Xerada Xalane oo ku taala xeyndaabka garoonka diyaaradaha ayaa ah goob amnigeeda aad loo ilaaliyo, waxaana xarumo ku leh Safaarado dhowr ah oo ay ka mid tahay Safaaradda Britain, Xafiiska Qaramada Midoobey.
Al-Shabaab ayaa horay weeraro qaraxyo iyo kuwa toos ah uga fuliyay Xerada Xalane sanadihii 2009-kii iyo 2014.